version 0.3.8 – ဘာသာစကားရဲ့ Detection
ဒီဇင်ဘာလ 20, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
ဒီဗားရှင်းကို website မှာဧည့်သည်များအတွက်ဘာသာစကားတွေ၏ထောက်လှမ်းထပ်ဖြည့် (browser ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီး – လုံလောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပြပါလိမ့်မယ် အကယ်. GeoIP ထည့်နိုင်ပါတယ်). ဒါဟာအစအသစ် wordpress ကိုသစ် `REL = canonical` ထောက်ခံပါသည် (2.9) အရာမနေ့ကပြန်လွတ်လာခဲ့သည်. ဆင်တူတဲ့ bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ၏ခါတိုင်းလိုရှယ်ယာကိုဒီမှာလည်းရှိတယ်. တဖန်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ကီဗင်ဂိုး Hart သူ့ရဲ့အကူအညီတောင်း.
ဒီကတရားဝင် wordpress ကိုအထောက်အကူပြုရန်နောက်ဆုံး version ဖြစ် 2.7, ငါတို့သည် သာ. အဟောင်း code base supporting ထက်တိုးတက်မှုပေါ်မှာငါတို့ကန့်သတ်ထားအရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲသွားမည်ဟုအဖြစ်. အဟောင်း wordpress ကို အသုံးပြု. မည်သူမဆိုငါတို့သည်နှစ်ခုအကြံပြုချက်များရှိသည်: 1. အဆင့်မြှင့်. သို့မဟုတ် 2. အဟောင်း transposh လွှတ်ပေးရန်ကိုသုံး. အနာဂတ်အတွက်အဆိုပါအစီအစဉ်နှင့်ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်, wordpress ကိုတစ်ကြိမ် 3.0 ကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်အပံ့ drop လိမ့်မည်ဟုထွက်ဖြစ်လိမ့်မည် 2.8. ဒီအပေါ်မည်သည့်မှတ်ချက်များကိုကြိုဆိုလိမ့်မည်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, RSS, wordpress ကို 2.8, wordpress ကို 2.9, wordpress မှာ plugin
version 0.3.7 – က feed ကိုအစာကျွေးပါ
ဒီဇင်ဘာလ 6, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု3comments
ဒီဗားရှင်းသစ်, RSS feeds တွေကို XML ကိုဆုံးမရမည်အပေါ်အလေးပေး. ထိုကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်နှင့်ဘာသာစကားအဖြစ်က Settings ယခုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်ခံနေရသည်. ကျွန်မကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ကီဗင်ဂိုး Hart သူတို့အားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ nailing ၌သူ၏အကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက်. အခြားတိုးတက်မှုများကိုဘာသာပြန်ထားသောခံရခြင်းမှအချို့သောအကြိမ်ကြိမ်စာပိုဒ်တိုများဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မည်သည့် parser ကိုရန်ဖန်ဆင်းထားပါသည် (ကဲ့သို့ [….]).
ထုံးစံအတိုင်း – အပြည့်အဝကြည့်ရှု ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်း.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, RSS, wordpress မှာ plugin
version 0.2.4 – ကြိုဆိုပါတယ် wordpress ကို 2.8!
ဇွန်လ 9, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု5comments
ယခုအသစ်လွှတ်ပေးရေးအသစ် wordpress ကို၏လာမည့်လွှတ်ပေးတာကိုကြိုဆို 2.8. ဒီ Release ၏အောက်ခြေတွင် feature ကိုမှာ scripts ကိုတွေအတွက်အထောက်အပံ့ပါဝင် 2.8 ပိုမိုမြန်ဆန် load လုပ်ဖို့သင့်စာမျက်နှာများ enable လုပ်ပြီး 'to yahoo ရဲ့ Yslow နှင့်အတူမြင့်မားရ​​မှတ်များရလိမ့်မည်. ဒါ့အပြင် bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများတန်ချိန်ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်း, အများဆုံးမှတ်သားဖွယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းမပြုခဲ့ကြောင်း themes များအတွက်ပြင်ဆင်ချက်သည်နှင့်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ကားလ် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ငှါငါ့ကိုထောက်ပြ၌သူ၏အကူအညီတောင်း. ငါတို့သည်လည်းကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် သူ Mike မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မှသမိုင်းကြောင်းနှင့်စာရင်းဇယားတားဆီးသောရှေ့ဆက်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခု Debugging ၌သူ၏အကူအညီတောင်း. နိုင်ငံခြားဘာသာစကား RSS feeds ယခုအလုပ်လုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိရန်ဖြစ်ပါသည်.
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဤလွှတ်ပေးရန်မွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ် – အဖြစ်အစဉ်အမြဲ – ငါတို့သည်သင်တို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုကြားပျော်မွေ့
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, RSS, wordpress ကို 2.8, wordpress မှာ plugin